ဒေါင်းတမာန်: ရန်ကုန်ဆိုတာ စစ်ခွေးတွေအောင်းရာ ဇရပ်
ပြည်ချစ် ဖခင် ဗိုလ်ချုပ် ပုံအား click လုပ်၍ ဗိုလ်ချုပ်၏ အမှတ်တရ အကြောင်းအရာများအားဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ် ။
My country land name is (BURMA) not Myanmar
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ မှာ
ဇာတိ နတ်မောက် မကွေးခရိုင်
တပ်မတော်ဆိုတာ ပစ်ရင်မိုးပေါ်ထောင်ပြီး ခြောက်တာမပါဘူး ပစ်ရင်မှန်အောင်ပစ်တယ်။ စစ်အာဏာရှင် - နေ၀င်း ၈၈၈၈
Early Hitstory Of Burma
Pyu City-states(c. 100 BC–c. 840 AD)
Bagan Dynasty(849–1287, 1st Empire)
Tounggoo Dynasty(1486–1752, 2nd Empire)
Kongbaung Dynasty(1752–1885, 3rd Empire)
Wars with Britain(1824–1826, 1852, 1885)
BritishLower Burma (1852–1886)
British Upper Burma(1885–1886)
U Nu and U thant
1st Military rule (1962–1989)
2nd Military rule(1989–present)
နာမည်ဆိုးနဲ့ ကိုယ့် ကိုယ်ကို သတ် သေခဲ့တဲ့ ဟစ်တလာ
နာမည်ဆိုးနဲ့ ကြိုးပေးဒဏ်ခတ် သေခဲ့ တဲ့ဆက်ဒမ်ဟူစိန်
နာမည်ဆိုးနှင့် မထင်မရှား သေသွားခဲ့တဲ့ အာဏာရှင်နေ၀င်း
နာမည်ဆိုးနဲ့ သေခဲ့တဲ့ပိုးပေါ့(သက်တမ်းတလျှောက်တွင်ပြည်သူ နှစ်သန်းမှ သုံးသန်းနီးပါး ကန်ဘောဒီးယားတွင် သတ်ခဲ့ )
နာမည်ဆိုးနဲ့ဝရမ်းထုတ်ထားတဲ့ ဆူဒန် သမ္မတ Omar al-Bashir
ဒါကတော့ နာမည်ဆိုးနဲ့ အသက်ရှင်နေပြီး သမိုင်းမှာ အမဲစက်တွင်နေမည့် ခွေးသူတောင်းစား
ရန်ကုန်ဆိုတာ စစ်ခွေးတွေအောင်းရာ ဇရပ်
နှလုံးသားအသိနဲ့ ကျေးဇူးဆပ်ကြည့်ပါ ဗိုလ်ထက်မင်း(ကိုဒေါင်းနီ မှပေးပို့ သည်)
စစ်အာဏာရှင်တွေအနေနဲ့ ကြပ်ပြေးကို ကြောက်လို့ ပြေးသွားခဲ့ကြပေမယ့် ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နဲ့ ရန်ကုန်မြို့တော်ဟာ မြန်မာပြည်ရဲ့ စစ်မဟာဗျူဟာအရတော့ အချက်အချာမြေအဖြစ် တည်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ စိစစ်ကြပ်မတ်မှုနဲ့ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု ရရှိမှသာ အရာရှိ/စစ်သည်တွေဟာ နယ်ကနေ ရန်ကုန်မြို့ကို ပြောင်းရွှေ့ခွင့်ရကြပါတယ်။ နယ်တပ်ကနေ ရန်ကုန်တိုင်းလက်အောက်ခံ တပ်တွေဆီ ပြောင်းချင်ရင် အရာရှိ/စစ်သည်တွေရဲ့ ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်ကင်းရှင်းမှု ရှိမရှိနဲ့ နောက်ကြောင်းကို သေချာစုံစမ်းပြီးမှသာ ပြောင်းခွင့်ပြုပါတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နဲ့ စစ်ရုံးတို့လိုမျိုး အတွင်းစည်းထဲကို ထပ်မံပြောင်းချင်ရင်တော့ ထောက်လှမ်းရေးတပ်တွေရဲ့ စိစစ်မှုကို ခံယူပြီးမှသာ ပြောင်းရွှေ့ခွင့် ပြုလေ့ရှိပါတယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ရန်ကုန်တိုင်းတပ်တွေဟာ VIP (အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်) ရဲ့ လမ်းကြောင်း လုံခြုံရေးယူရခြင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်း အတွင်းရှိ အဆောက်အအုံဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားတွေမှာ လုံခြုံရေးယူရခြင်း၊ နိုင်ငံခြားဧည့်သည်တော်တွေအတွက် ခရီးစဉ် လုံခြုံရေးယူရခြင်း၊ သမ္မတအိမ်တော်၊ လွှတ်တော်ရုံးနဲ့ အသံလွှင့်ရုံ အပါအ၀င် အစိုးရရုံး အဆောက်အဦတွေကို လုံခြုံရေး ယူပေးရခြင်း၊ လေဆိပ်၊ သင်္ဘောဆိပ်စတဲ့ နိုင်ငံတကာထွက်ပေါက်တွေကို ထိန်းချုပ်ရခြင်း၊ လေးထောင့်ကန်အခြေစိုက် (၁၅၅) မမ ဟောင်ဝစ်ဇာ မဟာဗျူဟာမြောက် တာဝေးပစ်အမြောက်ကြီးများနဲ့ ရေဒါအပါအ၀င် လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစခန်း ဌာနချုပ်တို့ရဲ့ အဝေးစည်း၊ အပြင်စည်းတွေမှာ လုံခြုံရေးယူရခြင်း၊ လေတပ်နှင့် ရေတပ်စခန်းဌာနချုပ်များရှိခြင်း စတဲ့ အရေးကြီးတာဝန်နဲ့ လျှို့ဝှက်ကိစ္စတွေကို လုပ်ဆောင်ရတာကြောင့်ဖြစ်တယ်။
ရန်ကုန်မြို့နဲ့ မနီးမဝေးမှာရှိတဲ့ ရဲမွန်၊ အင်းတိုင်နဲ့ ပဲခူးအခြေစိုက် တပ်မ (၁၁)၊ တပ်မ (၇၇) တို့ဟာလည်း ရန်ကုန်တိုင်း တပ်များနည်းတူ အဖြည့်ခံလုံခြုံရေးယူရတဲ့ တပ်များဖြစ်ကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် စစ်အာဏာရှင်တွေဟာ သူတို့စိတ်ကြိုက် အဲဒီလို စိစစ်ပြီးတာတောင် လူထုအုံကြွမှုအရေးတော်ပုံကြီးနဲ့ သံဃာတော် တွေရဲ့ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးကြီး ရန်ကုန်မှာ ဖြစ်လာခဲ့တဲ့အခါ ရန်ကုန်တိုင်းလုံခြုံရေးယူထားတဲ့ တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို ယုံကြည်စိတ်ချရမှု မရှိတော့ဘဲ တပ်မ (၆၆) လိုမျိုး ရှေ့တန်းက ခြေမြန်တပ်မတွေကို ဆွဲသွင်းတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
ဒါဟာ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကို သုံးသပ်ရရင် ရန်ကုန်တိုင်းက ရုန်းကန်နေရတဲ့ တပ်မတော်သားတွေအနေနဲ့ စားဝတ်နေရေး၊ အုပ်ချုပ်မှုကိစ္စရပ်တွေမှာ ပြည်သူလူထုနဲ့ နေ့စဉ် ထိတွေ့ဆက်ဆံနေရတာမို့ ပြည်သူလူထုရဲ့ ခံစားချက်ကို သိမြင်တဲ့ တပ်မတော်သားတွေနဲ့ ပြည်သူတွေ ပူးပေါင်းသွားမှာကို အာဏာရှင်တွေက စိုးရိမ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ရကတ တပ်ဖွဲ့ဝင် စစ်သည်တွေဟာ အောက်ခြေအနိမ့်ဆုံး ရဲဘော်ကအစ ပညာရေးမှာ မြင့်မားပြီး စာတတ်ပေတတ်များ ဖြစ်ကြတာမို့ စစ်အာဏာရှင်တွေပြောသမျှ သိပ်လက်မခံချင်ဘဲ အမှား၊ အမှန်ကို မြင်တတ် တွေးခေါ်တတ်လာကြတာကို စစ်အာဏာရှင်တွေက ရိပ်မိနေလို့ဖြစ်ပါတယ်။
ရဲဘော်တွေအကြောင်း သူငယ်ချင်းတွေ ပြန်ပြောပြလို့ သိရတာရှိပါတယ်။ လွတ်လပ်ရေးနေ့၊ တော်လှန်ရေးနေ့ စတဲ့ အခမ်းအနားတွေမှာဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံခြားဧည့်သည်တွေ လာရင်ဖြစ်စေ၊ ရဲဘော်တွေဟာ ဦးဝိစာရလမ်းမ အလယ်ကျွန်းတွေမှာကဲ့သို့ လမ်းကြောင်းတွေရဲ့ လုံခြုံရေးကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရပါတယ်။ အဲဒီအခါမျိုးမှာ မိုင်းရှာဖွေရေးအတွက် နေပူကျဲတဲကြီး အောက် လူမြင်ကွင်းမှာ အရှက်သိက္ခာကို ဘေးဖယ်ပြီး တိရိစ္ဆာန်များသဖွယ် လေးဖက်ထောက် ရင်ပေါင်တန်းကာ ပင်ပန်းဆင်းရဲခြင်းကြီးစွာ “ဆူးထိုး” ရှာဖွေကြရပါတယ်။
ဒါဟာ ယခင် ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် ဒု-တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် ဆန်းဆင့် (ယခု စစ်ရာထူးခန့်ချုပ်) က သူ့ရာထူးပြုတ်မှာစိုးလို့ ပူလောင်သောကဖြစ်ပြီး ရဲဘော်တွေကို ရက်စက်စွာ ခိုင်းစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ရဲဘော်တွေဟာ မြောက်ကိုရီးယား ကွန်မန်ဒိုတွေ ကို စစ်အာဏာရှင်တွေက အရှင်လိုချင်တယ်ဆိုတုန်းကလည်း အသေခံပြီး ၀င်ဖမ်းပေးခဲ့တာမို့ တာဝန်ကျေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ တာဝန်မကျေတဲ့ အမြီးကျက် အမြီးစား၊ ခေါင်းကျက် ခေါင်းစား စစ်အာဏာရှင်တွေကသာ အခုတော့ အဲဒီမြောက်ကိုရီးယားကို လည်ပင်းဖက်နေပြန်ပါတယ်။
ရဲဘော်တွေ၊ အရာရှိ ညီအစ်ကိုတော်တွေ ရန်ကုန်မြို့ လုံခြုံရေးဝင်ရရင် ရွှေတိဂုံဘုရား၊ သွေးဆေးကန်၊ ဘုရားငါးဆူလိုမျိုး ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာ တည်းခိုခဲ့လို့ သာသနာ့အရိပ် ဘုရားသားတော်ရဲ့အရိပ်မှာ ခိုလှုံခဲ့ရဖူးပါတယ်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းရဲ့ ရေတွင်းရေ ခပ်သောက်ပြီး ထင်းမရှိလို့ ဘုန်းကြီးတွေဆီက ကျီကြပြီး ဇွတ်ယူခဲ့ရဖူးပါတယ်။ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး စတင်တဲ့အချိန်မှာ အဲဒီသံဃာတော်တွေရဲ့ မျက်နှာနဲ့ ရင်ဆိုင်တွေ့လိုက်ရတော့ ရဲဘော်တွေရဲ့ နှလုံးသားမှာ ထိခိုက်ခံစားရပြီး တချို့ရဲဘော်တွေဆိုရင် သေနတ်ပြောင်းဝကို ရုတ်တရက် အောက်စိုက်ချလိုက်ပါတယ်။ ဒါဟာ သံဃာတော်တွေရဲ့ မေတ္တာပို့သံက ရဲဘော်တွေရဲ့ ကျည်ဆန်ထက် ပိုမိုထက်မြက်တယ်ဆိုတာကို ပြသတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ညီအစ်ကိုတော် အရာရှိတွေ၊ ရဲဘော်တွေကို ပြောချင်တာက ပြည်သူတွေကို ကျေးဇူးဆပ်ရမယ့်အစား ကျေးဇူးကန်းခဲ့တာမို့ ဒီကနေ့ဆိုရင် ရဲဘော်တွေဟာ မြေမြိုမှာစိုးလို့ ဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်းထဲ မနင်းရဲတဲ့ဘ၀ ရောက်နေကြရတယ်။ အဲဒါ ဘယ်သူ့ကြောင့်လို့ ထင်ပါသလဲ၊ ရဲဘော်တွေကို မတရားတဲ့ အမိန့်တွေပေးနေတဲ့ စစ်အာဏာရှင်တွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ရဲဘော်တို့ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ စားသောက်ဖို့ ရုန်းကန်ရှာဖွေကြရာမှာ ကြည့်မြင်တိုင် ငါးဒိုင်ကြီးတွေကိုသွားပြီး ပြည်သူတွေဆီက ငါးအပိုအကျန်တွေကို လက်ဖြန့်တောင်းခဲ့ရတဲ့ ဘ၀တွေကိုရော မေ့နေကြပြီလား။ လုံခြုံရေးယူပြီဆိုရင် ရဲဘော်တွေ ပင်ပန်းဆင်းရဲစွာ ကင်းစောင့်နေရလို့ ပြည်သူတွေက ဆေးလိပ်၊ ကွမ်း၊ သောက်ရေ၊ ဖျော်ရည် ပေးကမ်းခဲ့တဲ့ ကျေးဇူးကိုလည်း သတိရကြစေချင်ပါတယ်။
ဒီကနေ့မှာဆိုရင် ရဲဘော်တွေဟာ စားဝတ်နေရေး ကျပ်တည်းလွန်းလို့ ပြင်ပထွက်ပြီး ရုန်းကန်နေကြရတယ်။ အချင်းချင်းညှိနှိုင်းကာ ကိုယ်တာဝန်ကျတဲ့ ကင်းကျချိန်မှာ အခြားရဲဘော်တဦးကို အစားထိုးစောင့်ခိုင်းပြီး အဲဒီရဲဘော်က ပြင်ပကန်ထရိုက်အလုပ်ရှင်ထံ အလုပ်ထွက်လုပ်ကြရပုံတွေ၊ ကန်ထရိုက်လုပ်ငန်းခွင်မှာရှိတဲ့ အလုပ်သမားပြည်သူတွေက သနားကရုဏာသက်ပြီး ရဲဘော်တွေရဲ့အလုပ်ကို ပိုမိုလုပ်ကိုင်ပေးခဲ့ကြပုံတွေ… အဲဒီလိုပြည်သူတွေရဲ့ စေတနာထားပုံတွေကို ရဲဘော်တို့ မေ့နေကြပြီလားလို့ မေးလိုက်ချင်ပါတယ်။
ယနေ့အချိန်အခါမှာ ပြည်သူတွေရဲ့ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ မတရားအမှုဆင် ဖမ်းဆီးခံနေရပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ရဲဘော်တို့ရဲ့ တပ်မတော်ဖခင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ သမီးဖြစ်ပါတယ်။ ဖခင်ဗိုလ်ချုပ်ဟာ ဖဆပလ အစိုးရအဖွဲ့ကို ဦးဆောင်နေရသော်လည်း တပ်မတော်ကို မေ့မသွားဘဲ နိုင်ငံခြားသွားရင် နိုင်ငံခြားအစိုးရများရဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အတွက် လည်ပတ်မှုအစီအစဉ်ထဲမှာ အခြားတပ်မတော်များရဲ့ တိုးတက်နေမှု လေ့လာရေးအစီအစဉ်ကို အမြဲလိုလို ထည့်သွင်းစေပြီး တကူးတက လေ့လာကာ ဗမာ့တပ်မတော်အတွက် အမြဲတမ်း စဉ်းစားဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်အကြောင်း တစေ့တစောင်းပြောပြရရင် ဧည့်ခံပွဲတခုကအပြန် ကားပေါ်မှာ သူ့ဒရိုင်ဘာ ရဲဘော် ကျော်စိန် အရက်သောက်တာများပြီး အမူးလွန်အိပ်ပျော်နေလို့ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ PA ဗိုလ်ထွန်းလှက ငေါက်ငမ်းနေတာကိုတွေ့တော့ ဗိုလ်ချုပ်က ရုတ်တရက် ဟန့်လိုက်ပါတယ်။ “နေပစေကွာ၊ သူ တခါတလေ အရက်သောက်ပြီး အိပ်ပါစေ၊ မင်းနဲ့ငါ ရှေ့ခန်းမှာ မင်းက ကားမောင်းပြီး ငါကဘေးမှာ ထိုင်လျက်သား သွားရင်ရတာပဲ၊ အဲဒီ ရဲဘော်လေး ငါ့ကလေးတွေကို အနစ်နာခံပြီး ထိန်းခဲ့တာကွ၊ ခွင့်လွှတ်လိုက်ကွာ” လို့ ကရုဏာသံနဲ့ သူ့ရဲဘော်ကို ပြောပုံတွေကို ဖောက်သည်ချချင်ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့သမီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အဲဒီရဲဘော်လေးက ထိန်းခဲ့တဲ့ သံယောဇဉ်လေးကို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက လေးစားအသိအမှတ် ပြုခဲ့တယ်နော်။
အခု မင်းတို့အလှည့်ကျရောက်ပြီ။ တမလွန်က ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ သာဓုခေါ်သံလေး ကြားရအောင် ရဲဘော်တွေ ဘာလုပ်သင့်လဲ၊ အနည်းဆုံး ၀ိနည်းလွတ်လုပ်ကိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ မီဒီယာမှာ အသေးစိတ် မပြောချင်တော့ဘဲ လုပ်သင့်တာတွေလုပ်ပြီး တပ်မတော်သမိုင်းကြောင်းကောင်းအောင် ဖန်တီ်းကြပါလို့ တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။
Posted by ဒေါင်းတမာန် at Wednesday, August 12, 2009
၈ ၈ ၈ ၈ အရေးအခင်းဆိုတာ
နာဂစ်မုန်တိုင်း ၀မ်းနည်းကြောင်းအထိမ်းအမှတ် ဗီဒီယို .
မကြာခဏ ရောက်ဖြစ်တဲ့ နေရာ
3,600 Miles to NY & W-Dc
Free Burma Group
Karan Human right Org
▼ Aug9- Aug 16 (6)
သိက္ခာ မဲ့ နအဖ ဒါမှမဟုတ် မိစ္ဆာသန်းရွှေ
နန်းအချ ခံခဲ့ရတဲ့ မြို့ 
► Aug2- Aug9(18)
► Jul 19 - Jul 26 (27)
► Jul 12 - Jul 19 (22)
► Jul5- Jul 12 (27)
► Jun 21 - Jun 28 (27)
► Jun 14 - Jun 21 (27)
► May 31 - Jun7(41)
► May 10 - May 17 (23)
► May3- May 10 (20)
သန်းရွှေနှင့် အမျိုးများ ဗမာပြည်ဤသို့ရောင်းပါသည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမိန့် ခွန်း အပိုင်း ၁ နှင့် ၂
ကရင် ဗိုလ်ချုပ်မြ ၊ ခင်ညွှ န့်မျက်နှာချင်းဆိုင် ဆွေးနွေးခန်း ၂၀၀၄
၈-၈-၈-၈ ကျောင်းသားအစ လူထုအဆုံး အုံကြွတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ ကြလို့မ-ဆ-လ စနစ်ကို ဖြုတ်ချနိုင်ခဲ့ ကြတယ် ။
ဖတ်သင့် မှတ်သင့်သော စာမျက်နှာများ
Aung San Suu Kyi Page
burmacampaign.org.uk/Aung san suu Kyi
နိုင်ငံတော် လဒကြီး သန်းရွှေ အကြောင်း ကြားချင်ရင် သန်းရွှေပုံနှိပ်ပါ။
၂၀၀၈ ဒီဇင်ဘာ DSA ကျောင်းဆင်းမှာ့ မိန့် ခွန်းကို ပြောသွားတယ်၊“ ရဲဘော်တို့.ဒီနေ့ ဟာ အင်မတန်ထူးမြတ်တဲ့နေ့ ထူးနေ့ မြတ် ဖြစ်တယ်.ဘာဖြစ်လို့ လဲ ဆိုတော့ရဲဘော်တို့ ဟာ ရဲဘော် တို့ ဖြစ်နေ လို့ ဘဲ" တဲ့ 
စစ်အာဏာရှင်သန်းရွှေ လက်အောက်တွင် ဤသို့ ဤသို့ Oct 2007
(နေ၀င်းလက်အောက်တွင် ဤသို့ ဤသို့ ) စစ်အာဏာရှင် နေ၀င်းမိန့် ခွန်းနှင့် ၈၈၈၈ အရေးအခင်း ပစ်ကွင်း
Downtamun template | DOWNTAMUN